Cunsuri dambi lagu soo oogay ka dib naceyb uu u muujiyay Soomaalida | Somaliska
Nin cunsuri ah ayaa lagu soo oogay dambi baaris ka dib markii la sheegay in uu muujiyay naceyb ka dhan ah Soomaalida. Ninkaan ayaa bishii July waxa uu bogga Twitter ku qoray in uu ku faraxsanyahay geerida gabaryar oo 5 sano jir ah oo Soomaali ah taasoo la aaminsanyahay in lagu dilay degmada Avesta.
Ka dib qoraalkiisa ayaa dad badan waxay dacwo ka gudbiyeen in uu ninkaan galay dambiga loo yaqaan (hets mot folkgrupp) kaasoo ah dambiga naceybka jinsiyada. Booliska ayaan arintiisa sii daba galin xiligaas balse isbuucaan ayay soo baxday in dambi ooge lagu magacaabo Christina Weilander ay baaritaan dambi ku hayso ninkaan. Booliska ayaa markii hore sheegay in aysan macquul ahayn in la ogaado halka uu ku suganyahay ninkaan balse hada ayay soo baxday in si sahlan loo ogaaday cida uu yahay iyo meesha uu joogo.
Dambi oogaha ayaa sheegtay in aysan faahfaahin badan ka bixin karin kiiskaan balse ay sheegi karto oo keliya in ninkaan dambi baaris lagu haayo, oo haddii ay cadaato in uu galay dambiga nuucaan ah maxkamad la soo taagi doono. Cunsuriyiinta ayaa bogoga internetka aad ugu isticmaala in ay aflagaado iyo hadalo naceyb ah ku faafiyaan.
Waa wax fiican in la daba halo kiiskaas haddii kale wey sii badanyaan dhacdooyinka noocaas ah oo kale!!!!!!!!!
asc somaliska.com iyo inta akhrisato kadib samir alle haka siiyo waalidiinta dhalay canugta yar hadii eysan daba gelin poliska wexey u egtahay in eysan wax badan oo xanuun ah ku heynin lkin wexey ku imaan doonta wado kale oo xanuun leh in la qabto qaladka wexey u wanaagsan tahay caalamka oo dhan